Akhri: Madaxweynaha Kenya: Shacabku ha is dejiyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
2nd April 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Madaxweynaha dalka Kenya, Uhuru Kenyatta oo ka hadlay weerarkii lagu qaaday xarunta jaamacadda Garissa ee Garissa University College ayaa sheegay in halkaas loo diray ciidamo farabadan si ay dadka Alshabaab heystaan u soo badbaadiyaan.
Madaxweynaha Kenya ayaa dadka ugu baaqday inay is dejiyaan, isagoo shacabka Kenya ugu baaqay iney u duceeyaan dadka lau heysto Jaamcadda Gaarisa.
“Waxaan ka xumahay in qarankeena uu maanta halis galay, Argagixiso ayaa weerartay Jaamacadda Garissa,kuwaas oo geystay dilal iyo dhaawacyo ,sidookalena afduub u heysta dad badan, Khasaaraha dhacdadan oo faahfaahsan waxaa laga sugayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliyaha booliiska dalka, si gooni ah waxaa arrintan ugu xil-saarran taliyaha booliiska Garissa” ayuu yiri Uhuru Kenyatta.
“Anigoo matalaya dowladdeyda waxaan tacsi u dirayaa dhammaan qoysaska dadkii lagu laayay weerarkan,waxaan sii wadi doonnaa inaan u murrugoonno,waxaan u rajeynayaa in deg deg ah ay caafimaad u hellaan kuwa dhaawacan sidookale dadka afduubka loo heysto waxaan jeclaan lahaa in ay samata baxaan oo aan arko iyagoo nabad qaba.
Waxaan u hubinayaa shacabka Kenya in dowladdeydu ay qaadatay tillaabo kasta oo nooga aadan xaaladda ka jirta Garissa,shaqo adag ayaan ku jirnaa,waaxaana ugu baaqayaa shacabka in ay degganaan muujiyaan, waxaan ku guda jirnaa xallinta dhacdadan” ayuu sidoo kale yiri madaxweynaha Kenya.
Wasiirka Amniga Gudaha Kenya, Joseph Nkaissery ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey inta badan ardayda iyo macallimiinta Jaamacadda, dhanka kalana tiro aan la aqoonin ay weli Alshabaab ku heystaan gudaha Jamaacadda.